> Resource > Windows > Windows XP fariisiyo! Sidee inaan ku saxno!
Nidaamka Windows XP kaliya aan kala sooc lahayn fariisiyo, Dhadkan keeneysa?
Waxaan su'aal ah: Waa maxay sababta aan laptop si lama filaan ah u joojiyaan? Waxaan leeyahay ka Dell Inspiron 1501 orodka Windows XP. Ogeysiis aan, halka socda barnaamijyada ama si fudud u eegay Internet-ka, waxaa mararka qaarkood kaliya istaago, u celin jecla off, waxa kaliya laga fariisiyo iyo noqdo xasiliyaa, oo ma jirto si aan samayn karo ilaa aan waxba gacanta ay dami. Waxaan leeyahay scan virus McAfee ku rakiban iyo PC Tools, oo labadooduba way ii sheeg computer waa lacag la'aan ah fayraska. Maxaa samayn karaa? Fadlan iga caawiyaan inay dhulka Ingiriisi. Waad ku mahadsan tahay!
Dhab ahaantii, Windows XP fariisiyo, waxaa sababi kara khilaaf drive, Baadi diiwaanka, khilaafka barnaamijka, user profile musuqmaasuqa, iyo in ka badan. Weerar Virus ma aha sababta oo keliya. Waa hagaag, virus si fudud loo waayay karaa xirfad qalab anti-virus ah, laakiin ma ahan wax fudud in lagu dhiso nidaam faylasha aad mar ay u kharribmay. Inta badan waxay xitaa lama gacanta ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey. Waxaad u baahan tahay qalab gaar ah si aad ku sameeyey iyaga.
Si aad u hagaajin this Windows XP arrinta la xanibay, waxaad u baahan tahay barnaamij soo kabashada Windows. Haddii aadan haysan khiyaar ah, waxaad heli kartaa aan halkan talo: Wondershare LiveBoot Boot CD / USB , kaas oo awood kuu si ay u helaan your computer caadiga ah iyo hagaajin dhibaatadaada si guul leh.
3 talaabooyin lagu xalinayo Negeria Windows XP
Ka dib markii uu iibsigu barnaamijka, waxaad heli doontaa link download ka Wondershare ah. Download oo ku xidh on a computer-wanaag shaqo. Markaas raac tallaabooyinka hoose si ay u abuuraan kuu gaar ah Downlaods CD ama USB drive iyo hagaajin aad arrinta la xanibay XP in 3 tallaabo.
Step1. Guba Downlaods CD ama USB drive la 1 click
Orod barnaamijka on your computer, oo waxaa jiri doona kii saaxir ah raaca bandhigay. Geli CD maran ama USB drive galay computer iyo riix badhanka gubashada, waxaad ka heli kartaa CD ama khaanada Downlaods USB drive ee daqiiqo. Ma jiraan wax kale oo aad u baahan tahay in la sameeyo, laakiin si ay u qabtaan click olol ah waa.
Step2. Boot habka XP qaboojiyay
Next, bedesho nidaamka qaboojiyay XP iyo geliso CD gubay ama USB drive, markaas kombiyuutarka guuleysatey. Marka computer ka bilaabataa loading, F12 jaraa'id si ay u tagaan Menu Device Boot ah. Markaas dooro "suuro ama USB CD-ROM Drive", oo waxaad heli doontaa menu boot a soo socda. Guji "Boot ka LiveBoot" si aad u hesho computer aad freezed.
Step3. U dayactir aad Windows XP fariisiyo dhibaato
Waxa aad qaadataa xoogaa daqiiqo ah si aad u hesho nidaamka. Ka dib markii helo, aan bilowno Wondershare LiveBoot 2012 iyo tagaan "Windows Recovery" menu iyo dooran "Loading Shil Xalka" dhanka bidix. Halkan waxaad ka heli doonaa xal dhamaystiran si aad u Windows XP fariisiyo arrinta. Just raacaan habka iyo qabtaan xalka.